Sajhasabal.com | Homeकहिले सम्म अल्झीने सुदुरपश्चिमले जातियताको जालोमा......
दिनेश न्यौपाने । अछाम - म एक बाहुन परिवारमा जन्मियको छोरा हुँ । अछामको बिकट पहाडी जिल्ला अछामको बाटुलासैनमा मेरो जन्म भएको थियो । भौगोलिक बिकट्ताले पछि परेको मेरो गाउमा कमि केवल बिकासका लागी मात्रै हेरेर बसेको छैन कमिहरु त मेरो जन्म भुमिलाई गाडि, सडक, बिद्युत, स्वास्थ्य यस्ता आदि बिकासका नजरमा केहि पछि त छ । त्यसमा पनि समुदायका मान्छेहरुको मानसिकता चाहे जातिय छुवाछुत, अन्तर जातिय बिबाह, चाहे लिङ्ग भेद, छाउपडि कु प्रथाका कुरा किन नहोस यि कुराहरुले पनि निकै गहिरो जरा अझै गाडिएको छ ।
जो सन्तानले चाहेको खुशी लुटेर आफु र आफ्नो भनाइ इज्जतको फुटो खोल ओडि अडिग रहन्छन्, र सन्तानलाई रुवाएरै भएपनी आफु हाँस्न खोज्छन ।
कति अचम्मको छ है ? यो समाज जातियताकै नाममा अझै पनि अरुलाई रुवाउने काम गरिरहन्छन् कती सम्म ? आखिर बाहुन, क्षेत्री, दलित, यस्ता पनि जात हुन्छन् ? जात त केवल २ वटा छन् ति हुन् हरेकका महिला र पुरुष याँहा भन्दा अर्को जात म देख्दैन अझै भनम भाले जाति र पोथी जाती । आखिर सबैका नसा र शरिरमा बग्ने रगत रातो नै हुन्छ । जस्को मासु काट्दा पनि निस्कने रगत नै हो । मासु काट्दा सबै लाई दुख्छ भने अझ त्यस भित्र के को जातियता छ फेरि ? यसमा पनि प्रेम गर्नेहरुलाई यो कु दृष्टिले धरैलाई समाज बिहिन जिवन मरण को बिचमा पनि पुराएको छ । म पनि यस्को भागेद्धार बन्छु होला सायद ! मैले आमालाई भने आमा हेर्नु मत यो आफ्नो इष्टको छोरी संग बिहे नै गर्ने होइन भन्दा आमाको जवाफ थियो यदि त्यसो हो भने तैले यो घर समाज मात्रै होइन देश नै छोडेर गए हुन्छ । अनि फेरि प्रश्न गरे आमा यदि मैले क्षेत्रिको छोरी बिहे गर्दा के हुन्छ ? आमाले भन्नु भयो हेर आफु भन्दा तल्लो जात संग बिहे गर्यो भने समाजले ठिक मान्दैन तेरो छोरा छोरी पनि क्षेत्रि हुन्छ रे भन्नु भयो अनि फेरि मैले प्रश्न गरे हैन यो क्षेत्री भनेको के हो ? बाहुन भनेको के हो ? अनि दलित भनेको के हो ? आमाले कुनै जवाफ दिनु भएन ।
आखिर कहिले सम्म अल्झिने यो जातियताको जालोमा कति कतिले मर्ने, आफ्नो खुसि रोजौ आमा बा लाई बाच्न गार्हो आफ्नो खुशि त्यागौ आफैलाई बाच्न गार्हो ।
प्रेम जोडीलाई समाजमा जिउने वातावरण बनाइनु पर्छ यस संग सम्बन्धित सबै पक्षले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । समस्यालाई कानुनको प्रयोग भन्दा पनि जातीय सद्भाव कायम गर्नेगरी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समय भैसकेको छ । असमानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, समतामूलक, शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माण आजको आवश्यकता हो । यदि यो हुन्छ भने समाज रुपान्तरण गर्न कुनैै कठिन हुने छैन ।